Ny lalao multiplayer dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny filalaovana lalao amin'ny finday Android-nao dia mahafinaritra foana. Na eo aza izany, misy zavatra izay mahatonga azy io hahafinaritra kokoa sy afaka mifaninana amin'ireo namanao. Soa ihany fa nitombo be ny safidin'ireo lalao manolotra antsika an'ity safidy ity. Mihabetsaka ny lalao multiplayer azo alaina ao amin'ny Play Store. Ary amin'ny karazan-karazany hafa, noho izany dia misy zavatra ho an'ny tsirony rehetra.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao fisafidianana ny lalao multiplayer tsara indrindra ho an'ny Android. Noho izany, raha mitady kilalao amin'ity sokajy ity ianao, dia ho hitanao izay tianao. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
Izy rehetra dia kilalao manome antsika ny fahafaha-mampiasa fomba maody marobe. Amin'izany no hahafahanao mifanatrika amin'ireo namanao ao amin'izy ireo ary hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ity fomba ity. Lalao inona avy no nahatonga ny lisitray?
1 Filaminana sy korontana
4 Asfalta 8: mahazo haavo
5 Hevero ny hira!
Filaminana sy korontana
Manomboka amin'ity lalao ity izahay izay hitan'ny maro ho MMORPG tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao. Manana karazan-tsoratra voafantina tsara azo isafidianana. Avy amin'ny orcs, elves na mendel, ankoatry ny hafa. Inona koa, manolotra safidy safidy manokana ho an'ny toetranay. Zavatra izay tsy isalasalana fa mampiavaka azy amin'ny lalao Android hafa. Ao amin'ny tontolo feno nofinofy isika. Ny lalao Izy io dia manana maody marobe marimaritra iraisana izay hifanarahanay amin'ireo andiana sy foko hafa raha te handroso dia miady ary mandresy.
Iray amin'ireo lalao tsotra indrindra, fa iray amin'ireo mahafinaritra indrindra azontsika jerena amin'ity sokajy ity. Satria izy io dia lalao mifototra amin'ny Trivial Pursuit mahazatra, fa amin'ity indray mitoraka ity dia milalao avy amin'ny finday avo lenta. Tsy niova mihitsy ny fandidiana. Noho izany, manana fanontaniana avy amin'ny sokajy isan-karazany izahay ary ny tanjonay dia ny mamaly tsara mba hahafahantsika mahazo ireo fromazy kely ireo. Tsy misy tsy ampoizina amin'izany. Inona koa, azontsika atao ny misafidy ilay olona tiantsika hilalao ary manohitra azy ireo hiady amin'ny duel. Noho izany dia tsy isalasalana fa afaka mamorona manaikitra mahafinaritra miaraka amin'ny namanao na fianakavianao izy.
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na dia mahita dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Amin'ny laharana fahatelo dia miatrika lalao kilasika tahaka ny tsotra isika. Satria izy no telo misesy amin'ny fiainana rehetra, izay nilainay tamin'ny sombin-taratasy iray ihany koa tao am-pianarana. Amin'ity indray mitoraka ity dia afaka milalao azy amin'ny finday avo lenta amin'ny fomba tsotra isika. Indray, dia lalao izay tsy ahagaga ny fandidiana azy. Fantatsika rehetra ny fomba filalaovana ity lalao ity. Azontsika atao ny manohitra ny sakaizantsika mba hilalao lalao amin'ity kinova fanavaozana ny lalao ity.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity lalao multiplayer ho an'ny Android ity. Na dia mahita dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Asfalta 8: mahazo haavo
Iray amin'ireo lalao hazakazaka mampitolagaga indrindra hitanay amin'ny Android Tsy afaka nanjavona tamin'ilay lisitra izy ireo. Satria manolotra antsika ihany koa ny fahafaha-milalao amin'ny fomba multiplayer manohitra ny namantsika. Ny sary an'ity lalao ity tsy isalasalana fa iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra izy ireo, satria manana kalitao mahatalanjona izy ireo. Zavatra ambony lavitra noho ny ankamaroan'ny lalao finday. Manana fomba hazakazaka isan-karazany misy amin'ny lalao izahay. Azontsika atao koa ny misafidy izay mifanentana indrindra amintsika.
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Asfalta 8: Fihazakazahana haingana
Hevero ny hira!
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity lalao mahafinaritra ity izay ahafahantsika mifaninana amin'ny namantsika haminavina ny hira izay milalao amin'izao fotoana izao. Ka izany dia quiz mozika tena mampiala voly sy maivana. Ka raha mpitia mozika ianao dia fomba tsara iray hizaha toetra ny fahalalana mozika anao. Ny iray amin'ireo tanjany dia tranomboky mozika goavambe ananany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao multiplayer tsara indrindra ho an'ny Android
Files Go by Google dia hahafahantsika mizara rakitra amin'ny kaonty Google Drive anay